रूसका राष्ट्रपति पुतिनले माक्स-2021 मा भाग लिए – Sikkim Journal
MOSCOW REGION, RUSSIA - MAY 27, 2020: Russia's President Vladimir Putin holdsameeting with Moscow Mayor Sergei Sobyanin via video link from Novo-Ogarevo residence. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî ïðîâîäèò âñòðå÷ó â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ìýðîì Ìîñêâû Ñåðãååì Ñîáÿíèíûì. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
रूसका राष्ट्रपति पुतिनले माक्स-2021 मा भाग लिए
मस्को, 21 जुलाई। रूसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिनले मंगलबार माक्स-2021 मा भाग लिए। यस अवधिमा उनले केही डिस्पले उड़ानहरू पनि हेरे। यसमा एरोबेटिक पनि सामेल थियो। यस एयर शोको आयोजन 20-25 जुलाईसम्म जुकोवस्कीमा ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इन्स्टीट्यूटको हवाई क्षेत्रमा गरिएको छ। यस अवसरमा पुतिनले भनेका छन्, ‘15औं अन्तरिक्ष सैलून माक्स-2021 अन्तरराष्ट्रिय एयर शो- को उद्घाटनको अवसरमा सबैको स्वागत गरिरहेकोमा मलाई खुशी लागिरहेछ।
गत तीन दशकमा घरेलू र विदेशी विमाननको नवीनतम उपलब्धीहरूलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति माक्स एक महत्वपूर्ण र लोकप्रिय मञ्च बनेको छ। यस साल कोरोना महामारीको कारण समस्याहरू आईरहेपनि माक्सको सफल आयोजन भएको छ। यस साल 50 देशका 250 कम्पनीहरूले यस एयर शो- मा भाग लिए। यस साल कजाकिस्तान रूसको सहयोगी देश हो। रूस निश्चित रूपमा विमानन र अन्तरिक्ष विज्ञानमा सबै इच्छुक देशहरूको साथ सहयोग गर्नको निम्ति तयार छ।
मलाई विश्वास छ कि आधुनिक, प्रभावी र सुरक्षित रूसी-निर्मित तकनीक रूसी एयरलाइनहरूलाई बढ्दो यात्री मागलाई पूरा गर्नमा मद्दत गर्नेछ। यसबाट वैश्विक बजारमा रूसलाई आफ्नो ठाउँ बनाउनमा मद्दत मिल्नेछ औं एरोस्पेस क्षेत्रमा रूसको स्थिति बलियो हुनेछ’। उल्लेख्य, यस साल भारतीय वायुसेनाको सारङ हेलिकप्टरहरूले पनि यस एय़र शो- मा भाग लिए। यस अवधिमा रूसको टीमले पारम्परिक रूपमा सारङ टीमको स्वागत गऱ्यो।